Marka 14: 1-72,15 - Ny Baiboly
Marka toko 14, 1-72,15
Jesoa tao an-tranon'i Simona boka - Ny Paka farany - Ny namoronan'i Jesoa ny Eokaristia - Jesoa tao Getsemany - Jesoa voasambotra - Jesoa tao amin'ny mpisorona lehibe - Piera nandà azy.
1Rahefa indroa andro sisa ny Paka sy ny Azima, dia nitady hisambotra am-pitaka an'i Jesoa ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalana mba hamonoany azy; 2nefa, hoy izy, tsy tokony ho amin'ny andro fety fandrao mitabataba ny vahoaka. 3Ary nony tany Betania tao an-tranon'i Simona boka izy, dia nisy vehivavy anankiray niditra raha mbola nipetraka nihinana izy. Nitondra tavoara alabastra feno diloilo manitra sarobidy natao tamin'ny salohin'ny narda ravehivavy, ary novakiny ny tavoara, dia naidiny tamin'ny lohan'i Jesoa ny menaka. 4Maro tamin'izay teo no tezitra ka nifampilaza hoe: Nahoana re no lanina foana toy izao ity zava-manitra? 5Denie telon-jato mahery iny raha namidy ka homena ny mahantra. Dia nimonomonona tamin-dravehivavy izy ireo. 6Fa hoy Jesoa taminy: Avelao izy; nahoana hianareo no manao ny mampalahelo azy? Asa soa no nataony tamiko, 7fa ny mahantra dia misy eto aminareo mandrakariva, ka azonareo asian-tsoa araka izay tianareo, fa izaho kosa tsy ho eto aminareo mandrakariva; 8nanao izay azony natao izy; nohosorany rahateo ny tenako ho fandevenana ahy. 9Lazaiko marina aminareo fa na aiza na aiza hitoriana ity Evanjely ity amin'izao tontolo izao, dia holazaina koa izao nataon-dravehivavy izao ho fankalazana azy.
10Ary Jodasy Iskariota, ilay isan'izy roa ambin'ny folo lahy, dia nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona mba hanolotra azy. 11Faly ireo nony nandre izany, ka nanaiky hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay fotoana mety hamadihany azy.
12Ary tamin'ny andro voalohan'ny Azima izay famonoana ny Paka, dia nilaza tamin'i Jesoa ny mpianany nanao hoe: Aiza no tianao halehanay hamboaranay ny hihinananao ny Paka? 13Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka nilazany hoe: Mankanesa any an-tanàna, ary hifanena amin'ny lehilahy iray mitondra siny feno rano hianareo, ka manaraha azy. 14Dia lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidirany hoe: Izao no asain'ny Mpampianatra lazaina aminao: Aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paka amin'ny mpianatro? 15Dia hotoroany efi-trano malalaka voavoatra tsara hianareo ka ao no anamboary ho antsika. 16Dia nandeha ny mpianany ka tonga tany an-tanàna, ary nahita araka izay nolazainy taminy sy nanamboatra ny Paka.
17Nony hariva ny andro, dia tonga izy sy ny roa ambin'ny folo lahy. 18Ary raha nipetraka nihinana izy, dia hoy Jesoa: Lazaiko marina aminareo fa hamadika ahy ny anankiray aminareo izay miara-mihinana amiko. 19Dia nalahelo izy ireo, ka samy nanontany azy tsirairay hoe: Izaho va izany? 20Ary hoy izy taminy: Ny anankiray aminareo roa ambin'ny folo lahy izay miara-mandray amiko amin'ny tànany ao an-dovia. 21Ny Zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy; nefa loza ho an'izay hamadika azy! Tsara ho an'izany lehilahy izany ny tsy teraka. 22Ary raha mbola nihinana izy, dia nandray mofo Jesoa, ka nony efa notsofiny rano sy novakiny dia nomeny azy ireo, sy nataony hoe: Raiso, ity no vatako. 23Rahefa izany dia nandray ny kalisy izy, ka nony efa nisaotra, dia nomeny azy izany sy nisotroan'izy rehetra. 24Ary nolazainy taminy hoe: Ity no rako, dia ny ran'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro. 25Lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pihavin'ny andro hisotroako izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
26Nony efa nanao hira fiderana izy ireo, dia nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. 27Ary hoy Jesoa taminy: Ho tafintohina noho ny amiko hianareo rehetra anio alina; fa efa voasoratra hoe: Hokapohina ny mpiandry, dia hihahaka ny ondry; 28fa rahefa tafatsangana indray aho, dia hialoha anareo any Galilea. 29Dia hoy Piera taminy: Na dia ho tafintohina noho ny aminao aza izy rehetra, izaho tsy mba ho tafintohina na oviana na oviana. 30Ary hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina aminao fa anio alina ihany, raha mbola tsy haneno fanindroany akory ny akoho, dia handà ahy intelo hianao. 31Fa vao mainka niteny mafimafy kokoa izy nanao hoe: Na dia hiara-maty aminao aza aho, dia tsy handà anao. Ary nilaza toy izany koa izy rehetra.
32Ary tonga tany amin'ny saha atao hoe Getsemany izy ireo, dia hoy izy tamin'ny mpianany: Mipetraha eto hianareo mandra-pivavako. 33Ary nentiny hiaraka aminy Piera sy Jakoba ary Joany, dia nihoron-koditra sy ory indrindra izy. 34Ary hoy izy taminy: Ory ny fanahiko ka ila hahafaty ahy; mijanòna eto hianareo, ary miareta tory. 35Dia nandroso kely izy, ka niankohoka tamin'ny tany, ary nivavaka mba ho afaka amin'izany ora izany, raha azo atao, 36nanao hoe: Aba, Raiko, azonao atao ny zavatra rehetra, ka aoka tsy hikasika ahy ity kapoaka ity, kanefa aoka tsy ny sitra-poko no ho tanteraka, fa ny anao. 37Dia nankeo amin'ny mpianany izy, ka nahita azy natory, ary nilaza tamin'i Piera hoe: Ry Simona, matory va hianao? Tsy nahari-tory ora iray akory va hianao? 38Miambena hianareo, ary mivavaha, mba tsy ho latsaka amin'ny fakam-panahy. Marisika ihany ny fanahy, fa ny nofo no osa. 39Dia lasa indray izy nivavaka, ka ilay teny teo ihany no nataony. 40Nony niverina indray izy, dia nahita azy natory fa efa nilondolondo ny masony, ka tsy hitan'izy ireo izay havaly azy. 41Ary niverina fanintelony izy, ka nanao taminy hoe: Matoria amin'izao hianareo, ary mialà sasatra. - Aoka izay; tonga ny fotoana: indro hatolotra eo an-tànan'ny mpanota ny Zanak'olona. 42Mitsangàna hianareo, andeha isika: indro efa akaiky ilay hamadika ahy.
43Niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy, dia tamy Jodasy Iskariota isan'izy roa ambin'ny folo lahy, mbamin'ny vahoaka be nitondra sabatra sy langilangy, nirahin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona. 44Izy ireo dia efa nomen'ilay mpamadika azy famantarana toy izao: Izay horohako no izy, ka sambory, ary ento tsy amim-pisalasalana. 45Vantany vao tonga izy dia nanatona an'i Jesoa ka nanao heo: Arahaba, Raby, dia nanoroka azy izy. 46Ary nosamborin'ireo izy, dia nohazoniny. 47Fa ny anankiray amin'izay teo aminy nanatsoaka sabatra, dia namely ny mpanompon'ny lehiben'ny mpisorona, ka nahafaka ny sofiny an'ila. 48Ary niteny Jesoa ka nanao tamin'izy ireo hoe: Mova tsy ny hisambotra jiolahy no fihavinareo nitondra sabatra sy langilangy hisambotra ahy! 49Teo aminareo isan'andro aho, nampianatra teo amin'ny tempoly, kanefa tsy nosamborinareo, fa izany no ahatanterahan'ny Soratra Masina. 50Dia nandao azy ny mpianany rehetra fa lasa nandositra. 51Ary nisy tovolahy anankiray nanaraka azy, lamba fotsiny no teny an-kodiny, nosamborin'ireo koa; 52dia nariany ny lambany, ka lasa nandositra niboridana izy.
53Ary Jesoa nentin'izy ireo ho any amin'ny lehiben'ny mpisorona izay nivorian'ny lohandohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona. 54Piera kosa nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany an-tokotanin'ny lehiben'ny mpisorona, dia niara-nipetraka tamin'ny mpanompo teo anilan'ny afo, sy namindro. 55Tamin'izay ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpisaina rehetra dia nitady izay hiampangana an'i Jesoa hamonoany azy, nefa tsy nahita; 56fa maro no niampanga lainga azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangany. 57Nony inona dia nisy nitsangana niampanga lainga azy nanao hoe: 58Renay izy io nanao hoe: Horavako ity tempoly nataon-tànana ity, dia hanangana hafa tsy nataon-tànana indray aho amin'ny hateloana; 59fa tsy nifanaraka ny fiampangany na dia tamin'izany aza. 60Dia nitsangana teo afovoan'izy rehetra ny lehiben'ny mpisorona, ka nanontany an'i Jesoa hoe: Nahoana no tsy valianao izany fiampangan'ireo anao izany? 61Fa tsy niteny izy, na namaly akory. Dia nanontany azy indray ny lehiben'ny mpisorona nanao hoe: Hianao va no Kristy Zanak'Ilay isaorana? 62ka novalin'i Jesoa hoe: Izaho no izy; ary ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo an-kavanan'ilay mahefa ny zavatra rehetra sy avy eo ambonin'ny rahon'ny lanitra. 63Dia notriarin'ny lehiben'ny mpisorona ny fitafiany, ka hoy izy hoe: Inona indray no ilantsika vavolombelona? 64Efa renareo teo ny nitenenany ratsy an'Andriamanitra, ka ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy, 65ka ny sasany nandrora azy, dia nanarona ny tavany, sy namely totohondry azy ary nanao hoe: Vinanio; ny mpanompo avy no namely tehamaina azy.
66Ary raha mbola teo ambany amin'ny tokotany Piera, dia nankeo aminy ny anankiray tamin'ny ankizivavin'ny lehiben'ny mpisorona. 67Nony nahita an'i Piera namindro izy, dia nijery azy, ka nanao taminy hoe: Hianao koa naman'i Jesoa Nazareana. 68Fa nolaviny hoe: Tsy fantatro, ary tsy azoko akory izay lazainao. Dia nivoaka nankany alatrano izy ary naneno ny akoho. 69Fa nahita azy indray ilay ankizivavy, ka nilaza tamin'izay teo hoe: Naman'ireny koa io lehilahy io; 70fa nandà indray izy. Nony afaka kelikely, dia hoy indray ny olona teo tamin'i Piera: Naman'ireny tokoa hianao, fa Galileana koa. 71Tamin'izay sady niozona izy no nianiana hoe: Tsy fantatro akory izany lehilahy antsoinareo izany. 72Niaraka tamin'izay dia naneno fanindroany ny akoho. Ary tsaroan'i Piera ilay teny nolazain'i Jesoa taminy hoe: Tsy mbola haneno fanindroany akory ny akoho, dia handà ahy intelo hianao; ka dia nitomany izy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0128 seconds